HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa Caawa: Wadahadaladii Sergi Roberto oo hakaday, Xiisaha PSG ee Sergio Aguero iyo Qodobo kale
October 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Arsenal ayaa lagu qasbi doono inay lacag kaash ah ku iibso William Saliba Saliba waxa uu haatan amaah kula joogaa Marseill waxana uu xidhiidh xun la lahaa Arsenal tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray. sida ay sheegtay The Sun .
Wadahadaladii Sergi Roberto uu kula jiray Barcelona ee ku saabsanaa heshiis kordhinta ayaa joogsaday, Wargayska Sport ayaa sheegaya in uuna jirin wax horumar ah oo laga gaaray heshiis cusub oo uu xiddiga reer Spain u saxiixayo, laakiin wali waxa uu filayaa in uu saxiixo heshiis cusub oo ilaa 2024 ah. Sida ay sheegtay Sport
Fiorentina ayaa isha ku haysa in ay kor u qaado doorkeeda weerarka bisha January. Calciomercato ayaa ku warameysa in Borja Mayoral uu yahay mid ka mid ah dookhyada ay doorbidayaan, halka Gianluca Scamcca, Lorenzo Lucca, iyo Napoli xidigeeda Andrea Petag . Calciomercato
Newcastle ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Real Madrid Eden Hazard, Magpies ayaa isha ku heysa inay maal gashadaan xiddigo sare ka dib markii ay dhawaan la wareegeen Sacuudiga. sida laga soo xigtay El Chiringuito .
Inter ayaa bartilmaameed ka dhigtay daafaca midig ee Sampdoria Bartosz Bereszynski , Kooxda heysata horyaalka talyaaniga ayaa isha ku heysa inay xoojiso booskaas ka dib markii ay arkeen saxiixii xagaaga ee Denzel Dumfries oo ku dhibtoonaya inuu la qabsado nolosha Talyaaniga bilowga xilli ciyaareedka 2021-22. sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Paris Saint-Germain ayaa isha ku heysa heshiis isku badalasho ah oo ay ku lug leeyihiin Mauro Icardi iyo weeraryahanka Barcelona Sergio Aguero, Icardi ayaana boos heysan tan iyo imaanshihii Lionel Messi. sida laga soo xigtay El Nacional .
Real Madrid iyo Barcelona ayaa qaboojiyay xiisahooda daafaca Chelsea Antonio Rudiger, Labada kooxood ayaa isha ku hayay inay si xor ah kula wareegaan 28 jirkaan, kaasoo qandaraaskiisa Blues uu dhacayo xagaaga soo aadan. sida laga soo xigtay Cadena SER .
Barcelona ayaa ku riixaysa Ousmane Dembele inuu saxiixo heshiis cusub, Xiddiga garabka ka ciyaara ee reer France ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan waxana ay kooxda u sheegtay in uu haysto hal bil oo uu ku aqbali karo dalabkoodii ugu dambeeyay. sida laga soo xigtay Mundo Deportivo .
Liverpool ayaa qorsheyneysa inay lasoo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Dortmund Jude Bellingham, Jurgen Klopp ayaa aad ula dhacsan 18-sano jirkaan, laakiin wuxuu haatan kula jiraa Westfalenstadion heshiis dhacaya 2025. sida laga soo xigtay BILD .